Crossword ငွေ |
သငျသညျ crossword ပဟေဠိကိုကြိုက်ပါနဲ့? ကကစားစဉ်အချို့ကိုသင်ငွေရှာဖို့ချင်ပါတယ်? နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤမေးခွန်းများအဖြေဟုတ်မှန်လျှင်, ထို့နောက် Crossword ငွေပဲသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏. ဤ Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း သင်စကားနှင့်တစ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာရှိပါကကြိုးစားရန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးတချို့စကားလုံးများကိုစေနဲ့အိမ်ပြန်အချို့ကြီးတွေဆုကြေးငွေယူဖြစ်ပါသည်. ဒီဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေလက်ငင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်းအချို့အတွက်ကျော်ကြားသူသည် IWG ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမကဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်တစ် crossword ပဟေဠိများနှင့်တစ်ဦး Scrabble ဘုတ်အဖြစ်ကိုကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်သင်ပေးထားသောစာလုံးထဲကတချို့စကားလုံးများကိုဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်. လွယ်ကူသောအသံ? ကောင်းစွာ, ထိုသို့! ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့, တစ်ဦး IWG လောင်းကစားရုံကိုသွားနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်ကစား Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း အခုပဲ.
Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း Fantabulous အင်္ဂါရပ်များ
သင် home screen ကိုရိုက်ထည့်ပါအတိုင်းလိုဂိုသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ကြောင်းအောက်တွင်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောစားပွဲများမှာ. ညာဘက်ခြမ်းတွင်, ကွဲပြားတဲ့အက္ခရာစဉ်ပါဝင်သည်ဟုစားပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်. ညာဘက်ခြမ်းတွင်ဆုအပေါငျးတို့သတန်ဖိုးများရှိကြောင်းအဆိုပါဆုချီးမြှင့်သော့ချက်နှင့်အတူစားပွဲဖြစ်ပါသည်. ဥပမာ, သငျသညျစေလျှင်3စကားသည်သင်လုပ်လျှင်သင်£5ရ4words you get £10 and so on. အများဆုံး 10 words will give youa£100,000 which is also the highest winning in one bet. စာမျက်နှာ၏အလယ်ဗဟိုမှာသင်စကားလုံးများကိုဖန်တီးရန်အက္ခရာစဉ်တွေထားရှိရာစားပွဲတစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒီဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး RTP တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်. RTP ၏တန်ဖိုးပင်ဖြစ်သည် 86.62%, ကြီးမားသောအရာ.
ဒီ Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း Play ရန်ကဘယ်လို?
၏ဂိမ်း Crossword ငွေ တကယ်လွယ်ကူသည်. ဂိမ်းမစတင်မီ, သင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ကစားပွဲရဲ့အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ် + နှင့် _ ခလုတ်. သင်ပြုမိပါပြီသည့်အခါ, Play စ button ကို click. အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလွယ်ကူပါတယ်. သငျသညျပေးထားကြသည် 18 စကားများဖွဲ့စည်းရန်မှီဝဲခံရဖို့ရှိသည်အက္ခရာစဉ်. သင်က screen ၏အလယ်ဗဟိုမှာ crossword စားပွဲပေါ်အက္ခရာစဉ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သုံးအက္ခရာ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်. သငျသညျပွောပွသသောအခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးဆုစားပွဲပေါ်မှာသင်သည်အောင်ဘို့အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ရှိပါတယ်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအက္ခရာများ. အဆိုပါကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီလှည့်လည်၏အဆုံးအပြီးဆုခခြံဖြစ်ပါတယ်.
ဤ Crossword ထီပေါက်ဂိမ်း ရေတွင်း Scrabble ကိုလညျးတတျကြှမျးသူလူများနှင့် crosswords များအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်. စကားများဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်ကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ်တာဝန်ဖြစ်ပြီးကနေတချို့ကောင်းသောပိုက်ဆံဝင်ငွေ ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအသံ. လည်း, ကြီးမားသော RTP နှင့်ထိပ်တန်းအတန်းအစားဂရပ်ဖစ်ဒီဂိမ်းအများအပြားလောင်းကစားရုံချစ်သူများနေဖြင့်လေးစားအောင်.